२ ट्रक लागुऔषधसहित चार जना पक्राउ « Nepal Bahas
२ ट्रक लागुऔषधसहित चार जना पक्राउ
प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहीबार १५:०६
९ मंसिर, पर्सा । पर्सा प्रहरीले २ वटा ट्रक लागुऔषधसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं।२५ बहुअरी सडकखण्डमा ट्रकमा लकाई ल्याएको लागुऔषधसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीको चेकिङग टोलीले ड्राईपोर्टबाट परवानीपुरतर्फ जाँदै गरेका बा. ३ ख ८८०८ नम्बरको मिनी ट्रकमाथि शंका लागी खानतलासी गर्दा उक्त गाडीको चालक बस्ने सिटमुनि बोराभित्र लुकाइछिपाई ल्याएको लागु औषध कोरेक्स ५४ बोत्तल र सोही समयमा ना. ५ ख ६८७७ नम्बरको ट्रकलाई रोकी जाँच गर्दा चालक बस्ने सिटमुनि बोराभित्र लुकाइछिपाई ल्याएको लागु औषध कोरेक्स २२३ बोत्तल गरी जम्मा २७७ बोत्तल बरामद गरेको हो ।
बरामद लागु औषधहरू तथा दुईवटै ट्रक र निम्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई लागुऔषध सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाइएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन : पाँच ठाउँमा पार्किङ, प्रत्येक सिफ्टमा ३५० ट्राफिक प्रहरी परिचालन